အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း – Technological University (Hpa-An)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ကရင်ပြည်နယ်၊ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၏ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်ဘေး အလျား ၈၀၀ပေ RCColum + ကျောက်ကြီးစီမြေထိန်းနံရံဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်(၁၀၀၀’x၁၄’)ပတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ Steel Stucture (၁၂၀’ x ၈၈’ x ၂၇’) ရေမီးအပါအဝင်၊ အဝင်လမ်း(၁၀၀’x ၁၂’x ၈”)ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း အပါအဝင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃)ခု အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူ နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများကို ကရင်ပြည်နယ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)တွင် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ (က) တင်ဒါလျှောက်လွှာစတင်ရောင်းချမည့်ရက် – ၇ . ၁၀ .၂၀၂၀ ရက်နေ့ (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန် – ၆ . ၁၁ .၂၀၂၀ ရက်နေ့၊(၄:၃၀)နာရီတိတိ (ဂ) တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ – နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၊ကရင်ပြည်နယ် (ဃ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချိန် – ထပ်မံကြေညာပါမည်။
၃။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ (က) နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၊ကရင်ပြည်နယ် ဖုန်း-၀၉-၅၆၆၀၄၆၆၊၀၉၂၆၅၃၇၃၄၁၁၊ ၀၉-၂၆၅၃၇၃၅၂၂ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
အောက်တိုဘာ 6, 2020
Total views : 78500